Nbudata Sikorsky S-55 Okirikiri FSX - Rikoooo
downloads 15 086
pịa ebe a n'ihi na FS2004 dakọtara variant
Ebe a bụ a helikopta anya ọma, gwara site AlphaSim. Na mbụ payware, ebe ọ bụ na 2009 ọ na-freeware, otú ị ga-uru!
Mbụ helikopta ibu arụmọrụ, na S 55 A H19 emepụta site na US siri ike Sikorsky, mere ka ya mbụ arụmọrụ ụgbọ elu November 12, 1949. Na 1952, ọ natara ya akwụkwọ nke obodo airworthiness.
The arọ na nnukwu engines mgbe nsogbu ke ukot nke nku machibidoro echichi nke a bonka na otu rotor helicopters. The engineer Igor Sikorsky nwere echiche ruo n'ụlọ ndị engine n'ihu ụgbọelu na tankị n'okpuru ala ụlọ, na-agba ndị njem ogige n'elu engine. Ndokwa a otú a gwakwara na saịtị nke a bonka nanị.
The S 55 bụ dị ka a jupụtara na nkume atọ bladed articulated rotor flapping na ikpuru, na a abụọ-bladed ọdụ rotor na a ụgbọ okporo ígwè quadricycle. Ya bonka-enye ohere ebu nke 6 ka 8 njem ma ọ bụ isii litters arịọnụ maka ọgwụgwọ nke unan n'oge iga.
Dochie anya ya na ngwụsị 50s site ọzọ dị ike S 58, S 55, na ya n'ọtụtụ nsụgharị, e wuru na 1280 mbipụta. Ya akwụkwọ ikike e enwetara site na France, Japan na Great Britain. The British ike Westland ziri France 42 BỤ 55 nke uche na ụlọ akwụkwọ na GH2 (Algeria). (Isi Iyi: www.museehelico-alat.com)
Onye edemede: AlphaSim